Allgedo.com » 2013 » February » 09
Home » Archive Daily February 9th, 2013
Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya oo Maanta si Rasmi ah u furey Siminaar looga doodayo xeerka Isgaarsiinta iyo Warbaahinta
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta si Rasmi ah u furay Siminaar looga doodayo xeerka Isgaarsiinta iyo Warbaahinta oo ay soo diyaarisay Wasaarada Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gadiidka, waxaana siminaarkaan ka soo qayb galay bahda Saxafada, Isgaariisnta iyo Khubaro ka socota caalamka. Xeerkaan ayaa u jeedkiisu yahay sidii shuruuc...
Is Rasaaseyn Magaalada Boosaaso ku dhex martey Kooxo Burcad Badeed iyo Ciidamada Booliska
Kooxda Burcada ah ayaa isla xalay magaalada gudaheeda ku dhacay gaari uu leeyahay nin rayid ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi, kuwaasi oo jirdil u geystay xiligii ay gaariga ka dhacayeen muwaadinkaasi. Kooxdan gaariga dhacay ayaa qadar yar kadib waxay isku dhaceen ciidamo Booliis ah oo baaritaan ka waday wadada laamiga ah ee nawaaxiga shirkada Isgaarsiinta ee Golis, halkaasi oo ay Booliiska ku baaraan...
Madaxweynaha oo Shacabka ugu Baaqey Ka gudbida Qabiilka iyo U gudbida Qaranimada.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka gudbaan marxalada qabiilka una gudbaan qaran. Wuxuu sheegay Madaxweynaha inaysan faa’iido laheyn isqab-qabsi ku aadan arimaha jira balse ay wanaagsan tahay in waxyaabaha qaldan la isku sheego si loo saxo. Madaxweynaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in hada xaalada la taagan yahay laga gudbo sida uu sheegayna...
Midowga Yurub oo Sheegay in ay Taageerayaan Dowlada Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay ku dadaalayaan taageerada ay siinayaan dowlada cusub ee Soomaaliya si ay kaga gudubto marxalada kala duwan ee heysata dowlada Soomaaliya, si loo gaaro mustaqbal wanaagsan. Madaxweynaha golaha Midowga Yurub Herman Van Rompuy, ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Soomaaliya booqashadii magaalada Brussels ay aheyd mid taariiqi ah. Midowga Yurub ayaa sheegay in dalka Soomaaliya...
Maxkamada Ciidamada Soomaaliya oo Xukuno ku ridey Askar ka tirsan Dowlada iyo Alshabab.
Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Xooga Dalka oo Maalmihii ugu dambeeyey Madaxdooda ay ku sugnaayeen Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa halkaasi waxa ay xukunno dil iyo Xarig ah ku riday Askar ka tirsan Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwo ka tirsanaa Xarakada Al Shabaab. Liibaan Cabdi Yarow Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo Maalmihii dambe ku sugnaa...
Ogeysiis: Codsi kasoo qeybgal xaflad casho sharaf uu kasoo qeyb galayo Xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibril oo ka dhici doonta Minneapolis
Xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil, Minneapolis/MN. Read More →